Macaamiisha aragtiyaha qaadata ma weel cidla baa iyagu, yaa u diiday inay burjigooda adeejiyaan?” W/Q: Jamaal Cabdinaasir | Laashin iyo Hal-abuur
Macaamiisha aragtiyaha qaadata ma weel cidla baa iyagu, yaa u diiday inay burjigooda adeejiyaan?” W/Q: Jamaal Cabdinaasir
Hannaan kasta oo la meel mariyo ama la dheelli tiro wuxuu soo dhex jibaaxay garasho sooyaal, iyadoona lagu meel mariyay qeexidda wax loogu yeero (waaqica). Badanaa markii aan weel aan wax ku cuneyno waa hubaal in weelku asalkii ahaa mid faaruq, yeelkeede haddii loo kuur galo xaqiiqada weelku inuusan marneyn ee uu awood faaruqid uusan ku dhisnayn, isla markaana qofka bini’aadamka ahi aalaaba ma’aha mid u faaruq ah sida weelka oo kale oo is difaac aan garasho ku dhisnayn buu leeyahay oo meelo kale buu ka dhisan yahay. Ma jirto sabab loo raacdeeyo qof guul darraystay mana jirto sabab loo niyad jebiyo qof meel ka dhac sameeyay, hubbaanti ruuxa la raacdaynayo ama ruuxa ka meel maray xeendaabka uu ku jiray isagoo u baal maray caadadii u yiillay is la xeendaabka uu joogay.
Ma u fiirsatay dadka waxa ay ugu yeeraan qofka guuleystay? Mise u fiirsatay ruuxa xanaaqa waxa ay ugu yeeraan? Ma ahan wax qiil in loogu raadiyo u baahan waxaase jiro garasho togan oo loo baahan yahay daruufaha maxalliga ee ruux ama duul saameeya. Waxa jiro nisbooyin la meel mariyay waayahan aynu noolnahay iyadoona nisbadaas lagu qiimeeyay qaaciddo aan loo rafaadin laakiin garashadu waa inay ina tustaa ruuxa loo gartay heerka iyo juhdiga uu usoo maray inuu gaaro maamuuskaas ee ma ahan nisbo qaaciddo fudud in lagu miisaamo ruuxa heerkaa iyo waayahaa adag in lagu dheelsiiyo.
Waxaan ku baraarugay dadka quuta aragtiyaha dadka, iyagoon u cuskan garashada saxda ee ruuxa uu lasoo halmaashay mana jirto sifo loo bahaleeyay in ammin kooban lagu cabbiro ruuxa iyo heerkiisa waana wiiq soona saarto maskax ragaadis. Aragti kasta looma sababeyn karo xadka iyo waayaha ay jiri karto kaliyaata waa in loo kuur galaa aragtidani daawada ay u hayso waaqican taagan, illeen aragtiyahu waxay cabbir iyo miqiyaas hor leh u leeyihiin waayaha iyo xaaladda la taagan yahay inay baraarujin in xalal u keento si xaaladdaa looga samata baxo.
Aalaaba bulshadeenna badankood waxay u safteen qeexidda waxa loogu yeero, magac bixinta iyagoo iskula qumman marxaladda ay joogaan, haddana waxay wax ku miisaamayaan heerka iyo fahamkooda halka uu marayo, waana wax qarriban in ruux lasoo halmaashay waayo iyo maskax furnaan badan inay dad wakhti iyo miisaam fudud ku cabbiraan waana wareer iyo kacaa kufiisa.
Maxay dadkeenna kaliya ay macamiil magacyo u bixidda keennii garashada ku socdaalayey u noqdeen? Maxaa u diiday inay la socotamaan fahamka iyo garashada saxda ee ruux loogu baahan yahay. Waa mayal adeeg aan ku daraaseeyay waaqicaan iyo jiilka joogo ay u hirdamayaan u bixidda magacyo aan loo cuskan wayneyn maskax. Dadkeenni waa inay u furnaadaan baaluqa akhriska si miisaamka ay wax ku cabirayaan uu u sarreeyo qiimaha uu soo saarayo ama tirada uu soo saarayo.
Sharci ahaan iyo garasho ahaan ma sababto in weel buuxa loo dhawaado, waa in weelka buuxa lagu eego, eegmo fog loona barakeeyay maan-furnaan. Halkii lagu eegi lahaa indho furnaan.
Waxaa jiro qeexitaanno dhowr ah oo si fudud u suuq galay iyagoo qeexitaanadaas soo saarayaan aragtiyo loogu talagalay suuq fur, waana mashaakisha loo aananeyn karo inay magacaabeen duul aan maan-furneen. Waa si fudud in lagu tillaabsado horumar xagga soo saaridda aragtiyo gar leh iyadoonan loo maraneyn xeerarka uu aragtiyahu soo marayo.
Kolkii aad weel cidla ah wax ku cunto, waa kuu sabab inaad weelka waxa ku jiro faarujiso, adigoo cuskanaya ansixinta iyo nadiifinta weelka waxa ku jira, laakiin waa sabab kaloo fudud in weelka asalkii loogu soo baraarujin in waxyaabo yar-yar oo ka horo ruuxa cunayo inuu ku dheel-dheelo si barakada xitaa loogu nisbeeyo isla weelka wax lagu cunay. Miyeysan ahayn? Illeen insaanka kaliya inuu qaata iyo magac bixin u joogo ifkaan dooni meyno, waa inuu isagu xitaa weelku wax ugu reebaa haraa si weelka xitaa qaato u noqdo. Badanaa weelku waa faaruq si dareemaha indhuhu qabaan laakin ma qabto dareemaha garashada waayo weelku isu ma arko inuu faaruq yahay, isla markaana wuxuu u awood sheeganayaa weelka waxa lagu soo rido. Marka lama oran weelka waa faaruq.
Wax kasta waa in loo jeexaa dhabbo garasho ahaaneed iyadoona loo cuskanayo fahamka saxda ee walaxdu ama aragtidu sheeganeyso, ee yeynan u:cararin erey-bixin iyo maamuus bixin. Kaliya aan u tillaabsanno xaqiiqda iyo sahayda aan u qaadaneyno waxa aan kala saareyno.
Gu’ kasta waan socdaalnaa oo Wakhtiga iyo xaalad kasta waa loo tillaabsadaa ilaa aadmigu inta uu ka dhimanayo, laakiin waa inaynu garannaa xadka inta aan socdaaleyno ma xad lugo baxsibaa mise xad garasho garaad baxsibaa. Waa hamuun in nolosha aysan noqonnin wax kaliya in la qaato u baahan oo aan noqonno wax ficil iyo waayo-aragnimo u baahan aynu u baddalno.
Waxaase hubaal in la qeexo ruux kasta wax lagu sheego maamuus ama waxyaabo kale ayku hoos noolyihiin garashooyin kale oo dhibadda u aasa ruuxa iyo maamuuskiisa, waa sax oo haddii ruux oo wax akhris iyo faham sarreeyo waase wax jiro inuu lalloolama waaqica iyo daruufaha taagan si uu xal garasho u helo. Waa muhiim in la garto xaqiiqada cidda isu nisba yeeleysa iyo cidda loo nisba yeelayo, iyadoo loo marayo gunta garashada ee insaanku leeyahay, wax waliba yeynan qalad ka raadin, saxnaanna yeynaan ka raadin aan ka raadinno wax ina sifeeya oo caqligeenni halka uu u socdaalayey dhinac ka duwan waa inaan wax ka eegnaa. Waa in loo guuraa garashada caqliga ee wax lagu kala saaro, yeynaan wax ku halbeeginin garashada hadal ama far iska dhaqaaqda.
Oo haddaa marka aynu ruux ku carrabaabineyno xirashada dhar uusan awoodi kareyn ama uusan xiran karin soo ma baadigoobi karno joog la’eg uu ku socotami karo, isla seeskaa kolkii ruux noo yimaado ina yiraahdo ii bixi magac, ha ku deg-degin bixista magac eeg halka uu jooggiisa dhirir ama gaabni jooga, adigoo ka tusaala qaadanaya cabbirkiisa kolkaas way inoo fududaaneysaa bixista magac loo riyaaqo. Isla seeska markii aan ruux mug leh aan ku suntaneyno magac waa inaynu ka eegnaa halbeeggiisa fikir mid waaqic, mid bulsho ahaaneed, mid sooyaal iyo mid saadaalineed kolkaa ka dib waa inoo fududaaneysaa inaynu ku dharbaaxno maamuus loo eegay garasho sal ahaaneed.
Kolkasta oo aragti inoo soo gudubta ma’ahan inaynu qaadano waa inaynu lafaqnaa oo kala shaandheyn miiran la tiigsanaa halkii aan noqon lahay weel u bislaada kaliya in lala tiigsado dabka holcaya. Dhinaca kale dabku waa shidaal quudiya korarka waxa uu shidaalka siinayo laakiin aadmigu haddii lagu qanciyo waxkasta oo cusub ama aragti kasta inuu qaato, waa u wareer aan sal lahayn.